प्रजातन्त्रको ७० वर्ष, दलहरु भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त – KhojPatrika
प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार
प्रजातन्त्रको ७० वर्ष, दलहरु भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त
By खोज पत्रिका	 February 19, 2021 0
काठमाडौं । १०४ वर्षीया जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन सात । जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणाशासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको फागुन ७ गतेको गौरवलाई सम्मान गर्दै देशभर ७१ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षकै क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगलाल श्रेष्ठले विसं १९९७ माघमा जीवन आहुति दिएका थिए । नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको २००६ सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काँग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो । फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गर्छ । प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्ष पूरा भएर ७१ वर्ष लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक विषयमै भएको विवादले जनता निराश छन् ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बहुमत राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र माथिको प्रहार भन्दै सडक संघर्षमा पनि छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य बहुमत दलको कुरालाई वेवास्ता गर्दै आफूले चालेको संसद बिघटन कदम नै सही भएको बताइरहेका छन् । संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रको बाटो नविराउने बताइरहेका छन् ।
सात दशक लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले चाहेको संविधान त बन्यो तर, उनै राजनीतिक दलले आफूखुसी ब्याख्या गरिदिदा यतिबेला संबैधानिक संकट पैदा भएको छ । लामो त्याग र तपस्यापछि आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न दलहरुले इच्छा देखाएनन् । अहिले पनि सामान्य नागरिकको साझ र विहानको छाक टार्न नै हम्मे हम्मे परेको छ । दलहरुको कार्यशैलीप्रति जनताको आक्रोश अझै कायमै छ ।सधैं आन्दोलनमा होम्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्दा जनताको आवाज सुनुवाई नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् । जुन दल सत्तामा पुगेपनि जनताका दुख उही पिडा उस्तै ।
प्रजातन्त्रको ७० वर्ष दलहरु भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त
जनताको संघर्षले २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र अझसम्म पनि दिगो हुन सकेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरु शक्ति र अवसरको खिचातानिमा रुमलिदा जनतामा निरासा र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा गरिएको प्रतिवद्धताबाट राजा त्रिभुवन पछि हटे । प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ वर्षपछि राजा महेन्द्रले आफैँ संविधान दिएर निर्वाचन गराए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमतले सरकार बन्यो । तर, राजाले डेढ वर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जेल हाले । यसपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन रोकिएन । पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत भयो ।
निरन्तरको आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउन बाध्य भए । उनले फेरि सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिए । बितेको सात दशकमा प्रजातन्त्रका लागि कठिन संघर्षहरू भएका छन् । आजसम्म भएका परिवर्तनको जग जनताको संघर्षले २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै भएकोमा दुई मत छैन । जनमत संग्रहबाट राजा र पञ्चहरू ढुक्क भएपनि जनताको आन्दोलन रोकिएन । बरु प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीतिक दलहरु आआफ्नै तरिकाले जनजागरणको अभियानमा एकताबद्ध भए । अन्ततः दलहरू पञ्चायती शासनका विरुद्ध संयुक्त संघर्षका लागि एक ठाउँमा आए । फलस्वरूप २०४६ सालमा तीस वर्षको राजशाही ढलेर प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भयो । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रपछि आम निर्वाचनबाट संसद गठन भयो । जननिर्वाचित सरकार बन्यो । तर, यो पटकको संघर्षबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पनि दिगो भएन । बरु सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो । लगत्तै सशस्त्र विद्रोह सुरु भएर देशमा अशान्ति फैलियो ।
संसद सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्रै अल्झिदा जनजिविका, विकास र संमृृद्धिको सपना साकार हुन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याको अशान्ति र आर्थिक तथा मानवीय क्षतिसँगै संसदमा विकृति फैलिएको परिणामस्वरुप तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा फेरि शासनसत्ता हातमा लिए । देश निरंकुशताको सुरुङमा पसेपछि सात संसदीय दलहरु र सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति मार्फत संयुक्त जनआन्दोलन भयो । यसले शान्ति प्रक्रियासँगै राजाको निरंकुशता अन्त्य ग¥यो । अनेक उतारचढाव पार गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । यसपछि भएको आमनिर्वाचनले मुलुक स्थायी शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने मार्ग खुला गरेको भनिएपनि फेरि प्रजातन्त्र संकटमा परेको छ ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो आन्तरिक विवादमा असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अहिले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा कानुन व्यवसायीहरु दिनहु आन्दोलित भइरहेका छन् । यसले जनतामा निरासा र राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण पैदा गरिदिएको छ । तर, दलहरु अझै सच्चिने छाटकाट देखिदैन् ।
प्रजातन्त्रको ७० वर्ष
इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै बढ्यो हवाई भाडा पनि, कुन ठाउँ जान कति रकम ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा नेताहरु,कुन नेता कुन धारमा
नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा, नेकपाको आधिकारिक खोज्दै,बामदेवको अर्कै रणनिति
By खोज पत्रिका7hours ago 0
काठमाडौंको तारकेश्वरमा वर्डफ्लुको त्रास, कहाँबाट भित्रिन्छ पटक–पटक
संसद बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुग्दा ओलीले हटाए संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट गुरुङलाई
फेरि देखियो तारकेश्वरमा बर्डफ्लु, कुखुरा र दाना नष्ट गरियो
By खोज पत्रिका 13 hours ago 0
पूर्वमन्त्री जोशीलाई मस्तिष्कघात
सरकारले सच्यायो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, मृतकको लिष्टमा एकैदिन थपिए ६१९ जना
अवको सत्ता समिकरणमा कुन पार्टीको सांसद कति ? देउवा फकाउन प्रचण्ड माधव सक्रिय
यसरी गरेको थियो सर्बोच्च अदालतले संसद विघटन बदरको ऐतिहासिक निर्णय
March 2, 2019 4989 views
February 9, 2019 4952 views
March 7, 2019 4766 views
March 3, 2019 4686 views
महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको सरकारले काम गर्न नसकेपछि बीचमै घटायो बजेटको आकार
कालिमाटी तरकारी बजारमा कृषिमन्त्री अर्यालको छड्के, बजार व्यवस्थित गर्न निर्देशन